Nyika Ichaparadzwa Here?
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Bashkir Basque Batak (Toba) Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Garifuna Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lari Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mingrelian Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zapotec (Quiatoni) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nyika Ichaparadzwa Here?
Aiwa, nyika haizomboparadzwi, kupiswa nemoto, kana kutsiviwa neimwe. Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari akasika nyika kuti igarwe nekusingaperi.
“Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”—Pisarema 37:29.
“[Mwari] akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.”—Pisarema 104:5.
“Nyika inogara iripo nokusingagumi.”—Muparidzi 1:4.
“Muumbi wenyika noMuiti wayo, Iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe.”—Isaya 45:18.
Vanhu vachaparadza nyika here?
Mwari haasi kuzorega vanhu vachiparadza nyika nekuisvibisa, nehondo kana kuti nedzimwewo nzira. Asi ‘achatoparadza vaya vanoparadza nyika.’ (Zvakazarurwa 11:18) Achazviita sei?
Mwari achabvisa hurumende dzese dzevanhu idzo dzakundikana kuchengetedza nyika, oita kuti Umambo hwekudenga hutonge. (Dhanieri 2:44; Mateu 6:9, 10) Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, ndiye achange ari mambo weUmambo hwacho. (Isaya 9:6, 7) Paakanga ari panyika, Jesu akaratidza kuti aiva nesimba panjodzi dzinoitika dzega. (Mako 4:35-41) Paanenge ava kutonga saMambo weUmambo hwaMwari, Jesu achaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panyika. Achagadzirisa nyika kuti ive sezvakanga zvakaita munda weEdheni.—Mateu 19:28; Ruka 23:43.
Bhaibheri rinodzidzisa kuti nyika ichaparadzwa nemoto here?
Aiwa, haridzidzisi izvozvo. Vamwe vanofunga kudaro nekuti havanzwisisi zvinotaurwa pana 2 Petro 3:7, apo panoti: “Matenga nenyika zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto.” Inzwa zvinhu zviviri zvinotibatsira kunzwisisa zvinorehwa nemashoko iwayo:
Bhaibheri rinoshandisa mashoko ekuti “matenga,” “nyika,” uye “moto” kuchireva zvinhu zvakasiyana-siyana. Semuenzaniso, Genesisi 11:1 inoti: “Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete.” Muvhesi iyi, “nyika” iri kureva vanhu.
Mamwe mavhesi ari muna 2 Petro chitsauko 3 anoratidza zvinorehwa nematenga, nyika uye moto zvinotaurwa pavhesi 7. Mavhesi 5 ne6 anotaura nezveMafashamo epanguva yaNoa. Panguva iyoyo, nyika yakaparadzwa asi pasi richiripo. Mafashamo akaparadza vanhu vakanga vakaipa kana kuti “nyika.” (Genesisi 6:11) Akaparadzawo “matenga,” kureva vanhu vaitonga nyika iyoyo. Saka vanhu vakaipa ndivo vakaparadzwa, kwete nyika chaiyo chaiyo. Noa nemhuri yake vakapona pakaparadzwa nyika yepanguva iyoyo uye vakazorarama panyika Mafashamo paakapera.—Genesisi 8:15-18.
Kungofanana nezvakaitika paMafashamo, “moto” unotaurwa nezvawo pana 2 Petro 3:7, unoreva kuparadzwa kuchaitwa vanhu vakaipa. Mwari anovimbisa kuti kuchava ‘nematenga matsva nenyika itsva’ muchange muine “kururama.” (2 Petro 3:13) “Nyika itsva,” kureva vanhu vanoteerera, ichange ichitongwa ‘nematenga matsva,’ kureva Umambo hwaMwari. Umambo ihwohwo huchaita kuti nyika yese ive paradhiso.—Zvakazarurwa 21:1-4.
Chiratidzo ‘cheMazuva Okupedzisira’ Kana Kuti “Nguva Yokupedzisira” Ndechipi?
Bhaibheri rinotsanangura zviitiko kana kuti mamiriro ezvinhu aizotisvitsa ‘pakuguma kwenyika.’
Ungashamisika paunonzwa zvinonyatsotaurwa neBhaibheri nezvekuguma kwenyika.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nyika Ichaparadzwa Here?
ijwbq nyaya 141